μ-Opioid Receptor များသည် Striatum Mediate Pair Bond ဖွဲ့စည်းခြင်း၏တိုင်းဒေသကြီးများအတွင်းရှိထူးခြားသည့်သော်လည်းထူးခြားသည့်ဆုလာဘ်များ (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
μ-Opioid စင်ပြိုင်သို့သျောလညျးထူးခြားသောဆုကြေးယန္တရားများ (2015) မှတဆင့် Striatum ဖျန်ဖြေ Pair ကိုဘွန်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏ငျဒသေအတှငျးရှိ receptor
J ကို neuroscience ။ 2013 May 22;33(21):9140-9. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4123-12.2013.
Resendez SL1, အမိုးခုံး M က, Gormley, G, Franco: D, Nevárez N ကို, ဟာမစ် AA ကို, Aragona BJ.
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiology ၏လေ့လာမှုများများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်သောလူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများလူမှုရေး interaction ကနေစဉ်အတွင်းဆုလာဘ် circuitry ၏ activation pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ ဒီ circuitry အတွင်းမှာပဲμ-opioid receptors (Morse) တစ်ခုခန္ဓာဗေဒအသားအရောင်ခွဲခြားထုံးစံ၌သဘာဝကျကျကြိုးအပြုအမူ modulate; အဆိုပါ striatum (dorsal striatum, NAc core ကို, နှင့်တစ်ခုလုံးကို NAc shell ကို) တစ်လျှောက်လုံးတည်ရှိ Morse အထူး dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်းတည်ရှိသောသူတို့အားအပြုသဘော hedonics ဖျန်ဖြေသော်လည်း, ယေဘုယျစိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည် (နှင့်တစ်ဦး "hedonic ဟော့စပေါ့" အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ဤကွဲပြားငျဒသေအတှငျးရှိ Morse differential pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးဖျန်ဖြေခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကဤဒေသများအကြား Mor binding ထုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အဲဒီ receptor autoradiography ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ binding Mor အဆိုပါ ventral NAc shell ကိုနဲ့နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ NAc core နဲ့ dorsomedial NAc shell ကိုသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လာမယ့်ဤအငျဒသေအတှငျးရှိ Morse differential pair တစုံဘွန်းဖျန်ဖြေခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ HD-ဖီ-Cys-Tyr-D-Trp-Arg-Thr-ကလောင်-Thr-နယူးဟမ်းရှား၏ 1 သို့မဟုတ်3μgသုံးပြီး Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း2 အဆိုပါ dorsal striatum အတွင်းတွဲပြီးကာလနှင့်ဘယျလိုမှမဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းမိတ်လိုက်လျော့သွားသည်။ အခြားသောဒေသများပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်ကြသော်လည်းမတူဘဲ, dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, မိတ်လိုက်အပြုအမူ effecting မပါဘဲမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း inhibited ။ အဆိုပါ dorsomedial NAc shell ကိုရှိသူတို့မိတ်လိုက်နဲ့ဆက်စပ်အပြုသဘော hedonics မှတဆင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပေါ်လာသော်လည်းထို့ကြောင့် dorsal striatum အတွင်း Morse, မိတ်လိုက်၏ချွတ်ယွင်းနေတဆင့်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖျန်ဖြေ။
အဆိုပါလူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster) (လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiology လေ့လာနေများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တို့ et al ။ , 2005) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မိတ်လိုက်မိတ်ဖက်တစ်ဦးမိတ်လိုက်မိတ်ဖက်များအတွက်ကနဦးဦးစားပေးနဲ့စတင်ကြောင်းရွေးချယ် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤ "မိတ်ဖက် preference ကို" အပြုသဘောလူမှုရေး interaction က (နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Williams က et al ။ , 1992; Winslow et al ။ , 1993) ဆုလာဘ် circuitry နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည် (Aragona နှင့်ဝမ်, 2009) ။ အရေးကြီးတာက, ဒီ circuitry တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (ရည်မှန်းချက်-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုသြဒိနိတ်အတူတကွသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ valence code နှင့် hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များဖွဲ့စည်းနေသည်Dickinson နှင့် Balleine, 2010; Leknes နှင့် Tracey, 2010) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အပြုသဘော hedonics (အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Cacioppo et al ။ , 2004; Watson ဟာ et al ။ , 2010), လူမှုရေးသဘောသဘာဝ၏အပါအဝင် (Komisaruk et al ။ , 2010) ။ အပြုသဘော hedonics ဖြန်ဖြေတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်အာရုံကြောယန္တရား (μ-opioid receptors (Morse) ၏ activation ဖြစ်ပါသည်Panksepp et al ။ , 1980; Bakshi နှင့်ကယ်လီ, 1993; Pecina နှင့် Berridge, 2000) ကနျူကလိယ accumbens ၏ dorsomedial သောအဘို့ကို (NAc) shell ကို (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး hedonic ဟော့စပေါ့), ကွဲပြားအလုပ်လုပ်တဲ့ / ခန္ဓာဗေဒဝိသေသလက္ခဏာများ (နှင့်အတူ striatum တစ် subportion အတွင်းPecina နှင့် Berridge, 2005; Britt နှင့် McGehee, 2008; Smith က et al ။ , 2010; Britt et al ။ , 2012; Watabe-Uchida et al ။ , 2012).
ဆုလာဘ်၏အာရုံကြောအားပြိုင်မှုလေ့အစာစားချင်စိတ်လူမှုရေးအပြုအမူပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆနေကြသော်လည်း (Trezza et al ။ , 2011), "ဆုလာဘ်" ဟုပေါင်းတစ်စည်းတည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆမျှမက, (hedonics, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်သင်ယူခြင်း: က "ဆုလာဘ်" အနည်းဆုံးသုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုပတ်ဝိုင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2003)။ အရေးကြီးတာက, အစားအစာဆုလာဘ်၏လေ့လာမှုများ striatum တစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ဝေ Morse (တစ်ဦးခန္ဓာဗေဒအသားအရောင်ခွဲခြားထုံးစံ၌အစားအစာဆုလာဘ်၏စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့် hedonic အစိတ်အပိုင်းများကိုဖျန်ဖြေကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကယ်လီနှင့် Berridge, 2002) ။ အထူးသဖြင့် striatum တစ်လျှောက်လုံး Morse ၏ဆွ (dorsal striatum, NAc core ကို, နှင့်တစ်ခုလုံးကို NAc shell ကို) (ယေဘုယျစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်တိုးပွါးBakshi နှင့်ကယ်လီ, 1993; Zhang ကနှင့်ကယ်လီ, 2000; DiFeliceantonio et al ။ , 2012), အ dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse ကသာဆွ (အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်အပြုသဘော hedonic တုံ့ပြန်မှု mediates သော်လည်းကယ်လီ et al ။ , 2005; Pecina နှင့် Berridge, 2005; Smith ကနှင့် Berridge, 2007) ။ ဤသည်ခန္ဓာဗေဒမူဘောင်ထိုကဲ့သို့သော attachment ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြစ်ဆုလာဘ်၏အခြားအမျိုးအစားများ, ဖျန်ဖြေသော neurochemical နှင့် neuroanatomical ဆက်စပ်မှုစမ်းသပ်ဖို့ကိရိယာတခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ striatum ၏တိကျသောငျဒသေများနှင့်ဆုလာဘ်ကြောင့်, ဖြစ်နိုင်သည်တိကျတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းထိန်းညှိခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဆုလာဘ်၏ Mor စည်းမျဉ်း၏ဤကောင်းမွန်စွာထူထောင်အလုပ်လုပ်တဲ့ / ခန္ဓာဗေဒမြေပုံအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကကမကြာသေးမီက dorsal striatum အတွင်း, ဒါပေမယ့်မ ventral NAc shell ကို, တားဆီးမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း (အတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် dorsal striatum အတွက် Morse, ဒါပေမယ့်မ NAc, မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အရေးကြီးပါသည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်Burkett et al ။ , 2011) ။ သို့သော်ဤသည်ယခင်လေ့လာမှု (hedonics များအတွက်ဆိုလိုသည်မှာဒေသတွင်းအရေးပါသော) ကို dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ကြဘူး။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် striatum လေးဒေသများအတွင်း Morse များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အဲဒီ receptor autoradiography နှင့် site-ညွှန်ကြားအပြုအမူဆေးဝါးဗေဒကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဘာသာရပ်များမီချီဂန်တက္ကသိုလ် (မှာရပ်ကြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခဲ့ကြသည်Resendez et al ။ , 2012) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များ (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့နို့နှင့်သျောခဲ့ကြသည်Resendez et al ။ , 2012) ။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးမီချီဂန်တက္ကသိုလ်ရဲ့တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ Mor autoradiography အတှကျအသုံးပွုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles ဒေါက်တာ Zouxin ဝမ်၏ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှရပ်ကြီးခဲ့ကြသည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
receptor autoradiography ။
ဘာသာရပ်များ (လျင်မြန်ယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်ခြင်းနှင့်လိင်နုံအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ၏ဦးနှောက်ကနေတဆင့်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်n = 5) နှင့်လိင်နုံအမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles (n = 5) ကိုချက်ချင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပေါ်အေးခဲ, ဖယ်ရှားနှင့် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်Aragona et al ။ , 2006; Lim က et al ။ , 2006; Resendez et al ။ , 2012) ။ ဦးနှောက် (processing သည်အထိလေးအမှတ်စဉ်ကဏ္ဍများအတွက် 15 μmမှာ cryostat အပေါ် sectioned နှင့် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်လျူ et al ။ , 2010) ။ Mor autoradiography (DAMGO; PerkinElmer, catalog #NET 902; အများကြီး #3615807) (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကောက်ယူခဲ့သည်Resendez et al ။ , 2012) ။ Kodak BioMAx က MS ရုပ်ရှင် (ထိုဆလိုက်ပေါ်မှာတင်ကြ၏နှင့်6လကြာထိတွေ့ခဲ့သည်Resendez et al ။ , 2012) ။ အဆိုပါထိတွေ့မှုကာလပြီးဆုံးပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ပုံရိပ်တွေဟာ Scan ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို 1000XL Microtek ကင်နာကို အသုံးပြု. ဖမ်းယူခဲ့သည်။ Mor ၏သိပ်သည်းဆဟာ dorsal striatum, အ NAc core ကို, အ dorsomedial NAc shell ကို, နှင့် ventral NAc shell ကို (အတွင်း bindingသဖန်းသီး။ 1A,B) (NIH ImageJ 64 နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့သည်Bale et al ။ , 2007b) ။ Mor တစ်ခုချင်းစီကိုဒေသအတွင်း binding DENSITY ((ထို Corpus callosum ဖျူးမတိုင်မီ) လေးအမှတ်စဉ် rostral Coronal ကဏ္ဍများအတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်Aragona et al ။ , 2006) အဖြစ် callosum Fusion မှ caudal လေးအမှတ်စဉ် Coronal ကဏ္ဍများကို (anterior commissure အဆိုပါ ventricle နှင့်အတူ aligned သောအခါ) ။ ဤရွေ့ကား rostral နှင့် caudal ဒေသများအတွက် striatum ၏တစ်ဦးချင်းစီကိုသက်ဆိုင်ရာဒေသများအတွက်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။
rostral နှင့် caudal striatum ၏အထက်တွင်ခန္ဓာဗေဒအမှတ်အသားများ (ယခင်က voles တှငျဖျောပွထားပြီသောသူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်Aragona et al ။ , 2006) အဖြစ်လက်ရှိကြွက်များတွင် NAc hedonic ဟော့စပေါ့၏တည်နေရာကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောလျက်ရှိသောသူတို့ကို (ရစ်ချတ် et al ။ , 2013) ။ အကျိုးစီးပွားအားလုံးဒေသများ mean ထုနောက်ခံ (အဖြူကိစ္စဝေစာတွေကို (anterior commissure) မှနုတ်ခဲ့ကြသည်Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006) ။ ImageJ 64 ကိုလည်း (ထို rostral နှင့် caudal striatum အတွင်းငါးအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ပျမ်းမျှ Mor binding သိပ်သည်းဆ၏စုပေါငျးပုံရိပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1C,D) ။ ပုံရိပ်တွေ (တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole များအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အသုံးပြုသော rostral သို့မဟုတ် caudal ကဏ္ဍများကိုဖြစ်စေ stacking ဖွငျ့ခဲ့ကြသည်n = 20;4ကဏ္ဍများ / အမျိုးသမီး) နှင့်ထို့နောက်စည်းနှောင်သိပ်သည်းဆရုပ်တုဆင်းတုကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှခဲ့သည်။
Stereotaxic cannulation ။
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တစ် ketamine ၏အရောအနှော (100 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့် xylazine နှင့်အတူ anesthetized (10 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့် dorsal striatum (+ 26 မီလီမီတာတစ်ဦးက / P ကိုရည်ရွယ်တစ် 1.6-gauge နှစ်နိုင်ငံလမ်းညွှန် cannula နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးကြသည် ဟူ. ၎င်း, ± 1.5 မီလီမီတာ M / L ကို; -3.0 မီလီမီတာ: D / V ကို), NAc core ကို (+ 1.6 မီလီမီတာတစ်ဦးက / P ကို; ± 1.2 မီလီမီတာ M / L ကို; -3.5 မီလီမီတာ: D / V ကို), သို့မဟုတ် NAc shell ကို (+ 1.7 မီလီမီတာတစ်ဦးက / P ကို; ± 1 (-4.2 မီလီမီတာ: D / V ကို):; ventral -4.5 မီလီမီတာ: D / V ကို: dorsomedial; M / L ကိုမီလီမီတာAragona et al ။ , 2003; Burkett et al ။ , 2011) ။ အားလုံးဘာသာရပ်များ 10 နောက်ပိုင်းတွင်ချက်ချင်းခွဲစိတ်အဖြစ် 24 ဇပြီးနောက် / ကီလိုဂရမ် ketoprophen mg နှင့် 3-5 ဃသူတို့ရဲ့လှောင်အိမ်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ recover လုပ်ဖို့ပေးခဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
တွဲပြီးနှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုများ။
pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Mor စည်းမျဉ်းမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ site ကို-ညွှန်ကြား pharmacological ခြယ်လှယ် ( အသုံးပြု. လေ့လာခဲ့သည်လျူနှင့်ဝမ်, 2003; ကုရှ et al ။ , 2008) ။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များ (အထီးနှင့်အတူတွဲပြီးမတိုင်မီ 2.0 ဃများအတွက်3μg estradiol benzoate နှင့်အတူရစေတယ်အီစထိုဂျင်ခဲ့ကြသည်မုဆိုး et al ။ , 2005; Burkett et al ။ , 2011) ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု၏နေ့တွင်, အတုနှောက်ကျောရိုးအရည် (aCSF) (n = 11) သို့မဟုတ် aCSF တိကျတဲ့ Mor ရန် HD-ဖီ-Cys-Tyr-D-Trp-Arg-Thr-ကလောင်-Thr-နယူးဟမ်းရှား၏ 1 သို့မဟုတ်3μg်2 (CTAP) (Sigma-Aldrich) (Burkett et al ။ , 2011; Trezza et al ။ , 2011) ကို striatum လေးဒေသတစ်ခု (dorsal striatum သို့ထုံမွှန်းခဲ့သည် n = 6-10; NAc core ကို n = 5-6; dorsomedial NAc shell ကို: n = 4-8; ventral NAc shell ကို: n = 8-9) ။
ထိုခဏခြင်းတွင်ဆေးထိုးပြီးနောက်, အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များ (ထို "ဖက်" အဖြစ်ရည်ညွှန်း) ကဝတ္ထုအထီးနဲ့လှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာနှင့် cohabitate နှင့် 24 ဇဘို့မိတ်ခွင့်ပြု, ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း induces ရာခဲ့ကြသည် (Williams က et al ။ , 1992) ။ (ထိုတွဲပြီး၏ပထမဦးဆုံး6ဇမိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်, ဤကာလအတွင်း mated သူကိုသာဘာသာရပ်များလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်Carter ကနှင့် Keverne, 2002; Aragona et al ။ , 2003; လျူနှင့်ဝမ်, 2003; Curtis နှင့်ဝမ်, 2005a) ။ mount, intromission, နှင့်လိင်အင်္ဂါဒေသများ၏ဖြီးလိမ်းပုံ: တစ်ဦးကမိတ်လိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းအောက်ပါဖြစ်ရပ်များ၏ sequence ကို၏ဖြစ်ပျက်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခံခဲ့ရသည်။ အထီးစနစ်တကျအမျိုးသမီး mount နှင့် intromit ရန်အဘို့အ Lordosis လိုအပ်ပါသည်, ဤအပြုအမူကိုလည်းတစ်ဦးချင်းရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းစဉ်အတွင်းအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ dorsal striatum (χသို့ CTAP လက်ခံရရှိသူကိုဘာသာရပ်များအကြား mated သူကိုတိရစ္ဆာန်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိခဲ့2 = 3.79, DF = 2, p = 0.15), အ NAc core ကို (χ2 = 0.55, DF = 2, p = 0.76), ဒါမှမဟုတ် NAc shell ကို (χ2 = 1.29, DF = 4, p = 0.86) (စားပွဲတင် 1) ။ ဒီ 10 ဇကာလအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီတစ်နာရီ၏ပထမဦးဆုံး6မိကိုလည်းတွဲပြီးကာလအတွင်း Affiliate အပြုအမူ (olfactory စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ဘေးထွက်-by-side အဆက်အသွယ်) ၏ကြာချိန်အဖြစ် locomotor လှုပ်ရှားမှု (လှောင်အိမ်လက်ဝါးကပ်တိုင်) ၏ကြိမ်နှုန်းတွက်ချက်ရန်လည်းသွင်းယူခဲ့ကြသည်။
ကုသမှုအုပ်စုတစ်စုနှုန်း mated ကြောင်းဘာသာရပ်များ၏အချိုးအစားa
အဆိုပါ 24 ဇတွဲပြီးကာလပြီးနောက်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေတဲ့အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်မိတ်ဖက် preference ကိုယန္တရား ( အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်Ahern နှင့်လူငယ်တို့, 2009; Burkett et al ။ , 2011) ။ အတိုချုပ်ခြင်း, မိတ်ဖက် preference ကိုယန္တရားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတားအဆီးများ ချ. ဝေဖန်သုံးအညီအမျှအရွယ်အခန်း၏ရေးစပ်ခဲ့သည်။ ( "သူစိမ်း" အဖြစ်ရည်ညွှန်း) ဝတ္ထုအထီး (ဆန့်ကျင်ဘက်အခန်းအတွက်ထိထိရောက်ရောက်မ tethering ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအထီးမိတ်ဖက်တပါးအခန်းအတွက်ထိထိရောက်ရောက်မ tethering ခဲ့ကြသည်Donaldson et al ။ , 2010; Keebaugh နှင့်လူငယ်တို့, 2011) ။ စမ်းသပ်မှု၏အစအဦးမှာအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များ (အလယ်ဗဟိုတွင် (ကြားနေ) အခန်းနေရာချခြင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာ3ဇများအတွက်အခန်းအကြားကျင်လည်ကျက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်Curtis et al ။ , 2001; Bale et al ။ , 2007a) ။ တစ်ဦးကသိသိသာသာမိတ်ဖက် preference ကိုကစာရင်းအင်း ((အောက်တွင်ကြည့်ပါ) သူစိမ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်သုံးစွဲအချိန်ကြာချိန်ဖို့မိတ်ဖက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်သုံးစွဲအတောအတွင်းများ၏ကြာချိန်နှိုင်းယှဉ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်cho et al ။ , 1999; ကုရှ et al ။ , 2003; Bale et al ။ , 2007a) ။ Cannulae နေရာချထားမှုကိုတစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီး 40 μmကဏ္ဍများသို့အေးစက်နေတဲ့ဦးနှောက်သွေးတွေစီးထွက်လာကအတည်ပြုခဲ့သည် Leica cryostat (CM1850) ။ မှန်ကန်သောနေရာချထားမှုကိုနှင့်အတူသာလျှင်ဘာသာရပ်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အားလုံး striatal နေရာချထားမှုကိုအဆိုပါအရေးပါ၏ rostral ဝေမျှရှိကြ၏ (ဆိုလိုသည်မှာဒေသများတွင်ယခင်ကတစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအရေးကြီးဖြစ်ဖို့သက်သေပြချက်) (Aragona et al ။ , 2006).
ANOVA အဆိုပါ striatum လေးဒေသများအကြား Morse ၏သိပ်သည်းဆကိုနှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုခဲ့သည်တစ်ဦးကတဦးတည်း-လမ်း (Heinz et al ။ , 2005) ။ တစ်ဦးကတွဲ t စမ်းသပ်မှုတစ်ဦးချင်းစီဒေသ၏ rostral နှင့် caudal ဝေမျှတို့အကြား Mor binding သိပ်သည်းဆကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ANOVA (ဒေသ×မျိုးစိတ်) မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အကြား Mor binding သိပ်သည်းဆ (နှိုင်းယှဉ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်တစ်ဦးက Two-လမ်းInsel နှင့် Shapiro, 1992) ။ ANOVA သည့်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှု (စဉ်အတွင်းကုသမှုအုပ်စုများအဖြစ်စုစုပေါင်းအဆက်အသွယ်အချိန် (မိတ်ဖက်အဆက်အသွယ် + လူစိမ်းအဆက်အသွယ်) တို့အကြားမိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်တစ်ဦးကတဦးတည်း-လမ်းBurkett et al ။ , 2011) ။ ANOVA (အချိန်×ကုသမှု) Morse ၏တားစီးတွဲပြီး၏ပထမဦးဆုံး6ဇ (စဉ်အတွင်း Affiliate အပြုအမူတွေသို့မဟုတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်တစ်ဦးက Two-လမ်းCurtis et al ။ , 2001; Aragona et al ။ , 2003) ။ MOR ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဦး စားပေးယန္တရား၏အခန်းတစ်ခန်းစီတွင်ကုန်သွားသောအချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် ANOVA (ကုသမှု×အခန်း ၂) နှစ်ပါ ၀ င်သည်။ ANOVA များအားလုံးကို Tukey's နောက်မှလိုက်ကြသည် post ကို hoc စမ်းသပ်။ တစ်ဦးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုတစ်စုံနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ် t တပါးအမျိုးသားကြောင်းဖို့မိတ်ဖက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်သုံးစွဲအချိန်ကြာချိန်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်မှု (ကုရှ et al ။ , 2003; Curtis နှင့်ဝမ်, 2005a) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်χ2 တစ်ဦးကိုကုသအုပ်စုတစ်စုအတွင်း mated ကြောင်းဘာသာရပ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်, စာရင်းအင်းအရေးပါမှု≤0.05တစ်ခုαအဆင့်ကိုသုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ striatum တစ်လျှောက်လုံး binding Mor ၏အရေအတွက်
ယခင်လေ့လာမှုများအပြုသဘော hedonics (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး "hedonic ဟော့စပေါ့") များအတွက်အရေးကြီးသောအဖြစ် dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ, ထိုသို့ (ဒီဒီဒေသအတွက် Morse တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါ postulated ထားပြီးPecina နှင့် Berridge, 2000; Smith ကနှင့် Berridge, 2007) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ voles (ထို dorsomedial NAc shell ကိုအတွက် Morse တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆပြသ prairie ကြောင်း (သှေး) သတိထားမိResendez et al ။ , 2012သူတို့၏ပုံ။ 6), ဤ (အခြားအဖွဲ့ကထုတ်ဝေနေတဲ့မကြာသေးမီကစက္ကူတှငျလညျးထငျရှားBurkett et al ။ , 2011သူတို့၏ သဖန်းသီး။ 4) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ striatum ဖြတ်ပြီး Mor သိပ်သည်းဆ၏ပထမဦးဆုံးအရေအတွက်သည်သဖန်းသီး။ 1A-D ကို) နှင့် Mor သိပ်သည်းဆ (ဒေသအားဖြင့်ကွဲပြားကြောင်းကိုသရုပ်ပြF(3,19) = 4.70, p = 0.02) ။ အထူးသဖြင့် striatum ၏ rostral ဒေသများအတွင်း, Mor အဆိုပါ dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း binding အဆိုပါ ventral NAc shell ကိုထက်သိသိသာသာမြင့်မား (p = 0.05; သဖန်းသီး။ 1E) ။ အဆိုပါ NAc core ကိုအတွင်း binding Mor (ကိုလည်း ventral NAc shell ကိုထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့p = 0.01; သဖန်းသီး။ 1E) ။ Mor binding ၏သိပ်သည်းဆသိသိသာသာ striatum တခြားဒေသများအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွင်း Morse ဤစာတမ်းအတွက် ventral striatum ထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားမရကြပေမဲ့, က Mor သိပ်သည်းဆအလွန်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ (သို့မဟုတ် striosomes) တွင်အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်သည်ဤအကြောင်းကြောင့် patch ကို / matrix ကိုဖြန့်ဖြူးအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ရလဒ်ဖြစ်စေခြင်းငှါသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည် (ထို matrix ကိုအတွက်Graybiel နှင့် Chesselet, 1984; Johnston et al ။ , 1990; Gerfen, 1992).
အဆိုပါ striatum အတွင်း binding Mor ။ A, လက်ဝဲ, အ rostral striatum အတွင်း Mor binding သိပ်သည်းဆ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်။ B, ညာ, ထို caudal striatum အတွင်း Mor ဘွန်း၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပုံရဲ့ညာဘက်ခြမ်းတွင်ကျနော်တို့ယုတ် Mor binding သိပ်သည်းဆရရှိရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ဒေသများဖျောပွ။ Cအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ rostral shell ကိုတစ်ပေါင်းစပ်ပုံရိပ်။ Dက The caudal shell ကို။ Eအဆိုပါ rostral striatum ခုနှစ်, binding Mor (ထို ventral NAc shell ကိုနဲ့နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ NAc core နဲ့ dorsomedial NAc shell ကိုသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့n = 5) ။ F, binding Mor (ထို caudal striatum နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု rostral striatum အားလုံးကိုဒေသများတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့n = 5) ။ G, H, (အတွင်းမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အကြား Mor binding သိပ်သည်းဆမရှိခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်G() rostral သို့မဟုတ်Hအဆိုပါ striatum ၏) caudal ဒေသများ (n = 5) ။ *p ≤ 0.05 ။ **p ≤ 0.005 ။
Mor ကိုလည်း rostral-caudal gradient ကိုတစ်လျှောက်တွင်ကွဲပြားထု binding ။ (dorsal striatum: အ striatum အပေါငျးတို့သဒေသများအတွင်း, ထိုစည်းနှောင်သိပ်သည်းဆ caudal ဝေမျှနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ rostral ဒေသများတွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့t(4) = 4.69, p = 0.009), NAc core ကို (t(4) = 3.41, p = 0.03), dorsomedial NAc shell ကို (t(4) = 3.77, p = 0.02), နှင့် ventral NAc shell ကို (t(4) = 3.48, p = 0.03) (သဖန်းသီး။ 1F) ။ အတူတကွဤအချက်အလက်များကို striatum အတွင်း, Mor binding သိပ်သည်းဆဟာ rostral ဒေသများအတွင်းသိသိသာသာမြင့်မားကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် NAc shell ကို, Mor binding သိပ်သည်းဆအတွင်း rostral dorsomedial ဒေသအတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် (သဖန်းသီး။ 1C,D).
monogamous နှင့် nonmonogamous vole မျိုးစိတ်အကြား striatal Mor binding သိပ်သည်းဆအတွက်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်း voles တစ် nonmonogamous vole မျိုးစိတ် (အကြား Mor binding သိပ်သည်းဆနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါBeery နှင့် Zucker, 2010) ။ ယခင်လေ့လာမှုများအဲဒီ receptor စည်းနှောင်ပုံစံများနှင့်တစ်ဦး vole မျိုးစိတ်များ၏လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ (အကြားဆက်ဆံရေးကိုဖော်ထုတ်ကြောင့်ဒီနှိုင်းယှဉ်ခဲ့Insel နှင့် Shapiro, 1992; Insel et al ။ , 1994; ဝမ် et al ။ , 1997; လူငယ်တို့ et al ။ , 1997, 1999; Lim ကများနှင့်လူငယ်, 2004; Aragona et al ။ , 2006; Barrett et al ။ , 2013) ။ အထက်ဆင်တူ, binding Mor အဆိုပါ dorsal striatum, အ NAc core ကို, အ dorsomedial NAc shell ကို, နှင့် ventral NAc shell ကိုတိုင်းတာခဲ့ပါတယ်။ ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း (Insel နှင့် Shapiro, 1992), အ rostral striatum မဆိုဒေသများအကြားစည်းနှောင်သိပ်သည်းဆမရှိမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု (ရှိခဲ့F(2,32) = 0.41, p = 0.53; သဖန်းသီး။ 1G) ။ အဆိုပါ caudal striatum အတွင်းမှာပဲ binding Mor များအတွက်ခြုံငုံ ANOVA (သိသာခဲ့သည်F(2,32) = 4.12, p = 0.05), ဒါပေမယ့် post ကို hoc စမ်းသပ်မှု (ထို striatum မဆိုဒေသအကြားမည်သည့်တိကျသောမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုထုတ်ဖေါ်မပြုခဲ့သဖန်းသီး။ 1H).
vole မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးထိုအ receptors ၏တသမတ်တည်းစည်းနှောင်ပုံစံဟာ striatum အတွင်း Morse မျိုးစိတ်-တိကျတဲ့လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးမှာတိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္ဍမဟုတ်ဘဲသဘာဝအဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာမအကြံပြုထားသည်။ ဤတသမတ်တည်းအခြားမျိုးစိတ်များ၏ NAc အတွင်း, binding Mor ၏မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆကြွက်များ၏ dorsomedial NAc shell ကို (အတွင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်Herkenham et al ။ , 1984) နှင့် Mor လူ့ NAc shell ကိုအတွင်း binding လည်းအလွန်အမင်းပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဖြစ်သတင်းပို့နေသည် (Voorn et al ။ , 1996), နောက်ထပ်တိကျတဲ့ striatal ဒေသများအတွင်း Morse ဆုလာဘ်တစ်ခုဘုံအာရုံကြောငွေကြေးအဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ Morse လူမှုရေးအကျိုးသည်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြပြီး, လူမှုရေးစဘွန်းများအတွက်ထို့ကြောင့်အရေးကြီးသောကျနော်တို့ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက် striatum တစ်လျှောက်လုံး Morse တစ်နှံ့နှံ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့
Morse နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း
ဒါဟာမကြာသေးခင်က (1 μg CTAP အတူ dorsal striatum အတွက် Morse ၏ပိတ်ဆို့အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်Burkett et al ။ , 2011) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ပထမဦးဆုံးဒီတွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားထွက်ထားကြ၏။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (Burkett et al ။ , 2011), aCSF လက်ခံရရှိကြောင်းထိန်းချုပ်မှုအမျိုးသမီး (သိသိသာသာဖက်ဦးစားပေးပြသt(10) = 2.895, p = 0.02; သဖန်းသီး။ 2A) ။ ထို့ပြင်ငါတို့သည်လည်း (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် CTAP အတူ dorsal striatum အတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခြင်းဖြင့်ဤလေ့လာမှုပုံတူကူးယူBurkett et al ။ , 2011), ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွဲပြားပါတယ်။ အထူးသကျနော်တို့ 1 μg CTAP အတူ dorsal striatum အတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်သောတွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားခဲ့ပါဘူးt(8) = 3.34, p = 0.01; သဖန်းသီး။ 2A) ။ သို့သော်လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြု CTAP (3 μg) ၏ပိုမိုမြင့်မားထိုး (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးt(5) = 0.72, p = 0.50; သဖန်းသီး။ 2A) ။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (စုစုပေါင်းအဆက်အသွယ်အချိန်မထိခိုက်ခဲ့ပါF(2,26) = 2.38, p = 0.114; သဖန်းသီး။ 2C) သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအခန်းသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကို (F(2,72) = 9.41, p = 0.97; သဖန်းသီး။ 2B) ကိုမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းယခင်အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေကြောင်းနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုံးစုံတွေ့ရှိချက်Burkett et al ။ , 2011), နှင့်ထိရောက်သောထိုးမှာရှိတဲ့ခြားနားချက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားအတွက်အနည်းငယ်ကွာခြားမှု၏ရလဒ်ဖြစ်မည်အကြောင်း (သဖန်းသီး။ 5), အထူးသဖြင့် (patch ကို / matrix ကို activation အတွက်အပြောင်းအလဲပေးထားGraybiel, 1990; Gerfen, 1992()သဖန်းသီး။ 2A, inset), သို့မဟုတ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောကိုလိုနီထံမှဘာသာရပ်များအကြားအနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိအပ်သည်အမြဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ dorsal striatum အတွင်း Morse မိတ်လိုက်၏တားစီးကနေတစ်ဆင့်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးထိန်းညှိ။ Aဤဒေသသို့ CTAP ၏မြင့်ထိုးထိုးဆေးဖက် preference ကိုဖျက်သိမ်းသော်လည်း, ထို dorsal striatum သို့ aCSF သို့မဟုတ် CTAP ၏အနိမ့်ထိုး၏ Injection, မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားစီးကြဘူး။ Inset, မီးခိုးရောင်အတွက် shaded ဆေးထိုး၏ဆိုက်ကို (လက်ဝဲ) နှင့် dorsal striatum အတွင်း Mor ၏စည်းနှောင် (ညာ) ။ B-D, Mor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (မထိခိုက်ခဲ့ပါB) လှောင်အိမ်အချိန်သို့မဟုတ် (C) စုစုပေါင်းအဆက်အသွယ်အချိန် (ဆိုလိုသည်မှာအချိန်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း) ကိုမိတ်ဖက် + သူစိမ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့ရသည်။ သို့သော် CTAP ၏မြင့်ထိုးနှင့်အတူ Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ထိုလျော့နည်းသွားDအဆိုပါတွဲပြီးကာလအတွင်းမိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်၏) စုစုပေါင်းအရေအတွက်က (n = 6-10) ။ *p ≤ 0.05 ။
အဆိုပါ dorsal striatum, အ NAc core ကို, အ dorsomedial NAc shell ကို, သို့မဟုတ် ventral NAc shell ကိုသို့ aCSF, 1 μg CTAP, ဒါမှမဟုတ်3μg CTAP ၏ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များကိုကိုယ်စားပြုပုံကြမ်းပုံရိပ်တွေ။
အရေးကြီးတာက, အ dorsal striatum အတွက် Morse ၏ပိတ်ဆို့သိသိသာသာပါ (လေ့ကာလအတွင်းမိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုလျော့ကျF(2,26) = 3.58, p = 0.04; သဖန်းသီး။ 2D) အလေ့ကာလအတွင်း Affiliate လူမှုရေး interaction ကအဆင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ (F(2,120) = 0.97, p = 0.40; စားပွဲတင် 2). post ကို hoc စမ်းသပ်မှုဟာ dorsal striatum သို့ CTAP ၏မြင့်ထိုးလက်ခံရရှိသူကိုဘာသာရပ်များထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (ထက်သိသိသာသာလျော့နည်း mated ကြောင်းထင်ရှားp = 0.05; သဖန်းသီး။ 2D) ။ အရေးကြီးတာက, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မိတ်လိုက်အပြုအမူကျော် Mor စည်းမျဉ်းယခင်လေ့လာမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် (Burkett et al ။ , 2011); မိတ်လိုက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်နှင့်ဤဒေတာကိုမိတ်လိုက် attenuates သော dorsal striatum သို့ CTAP တစ်ထိုး၏အုပ်ချုပ်မှုအကြံပြုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှောင့်အယှက်သောအားဖြင့်ယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်လိုက်အပြုအမူ၌ဤကျဆင်းခြင်းဟာ dorsal striatum အတွက် Morse ၏ပိတ်ဆို့အဖြစ်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအတွက်ယေဘုယျကျဆင်းခြင်းမှအလယ်တန်းမဟုတ်ပါဘူး (အလေ့ကာလအတွင်း locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့F(2,120) = 1.37, p = 0.27; စားပွဲတင် 3).
အဆိုပါတွဲပြီးကာလအတွင်း Affiliate အပြုအမူa
အဆိုပါတွဲပြီးကာလအတွင်း Locomotor လှုပ်ရှားမှုa
NAc core ကို
ကျနော်တို့လာမယ့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း (ထဲတွင် NAc core ကိုအတွင်း Morse တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍစမ်းသပ်ပြီးသဖန်းသီး။ 5) ။ အဆိုပါ NAc core ကိုအတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (အနိမ့်ဖြစ်စေနှင့်အတူt(5) = 3.07, p = 0.03) သို့မဟုတ်မြင့်မားသော (t(5) = 3.07, p = CTAP ၏ 0.03) ထိုး (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားစီးဘူးသဖန်းသီး။ 3A) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းသုံးစွဲအချိန်ကိုမခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှု (လည်းရှိခဲ့သည်F(2,57) = 0.03, p = 0.97; သဖန်းသီး။ 3B) သို့မဟုတ်စုစုပေါင်းအဆက်အသွယ်အချိန် (F(2,21) = 0.18, p = 0.88; သဖန်းသီး။ 3C) ကိုမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း။ အဆိုပါတွဲပြီးကာလအတွင်း Affiliate အပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက် (လည်းရှိခဲ့သည်F(2,108) = 0.06, p = 0.94; စားပွဲတင် 2) သို့မဟုတ် locmotor လှုပ်ရှားမှု (F(2,108) = 0.87, p = 0.43; စားပွဲတင် 3) ။ အဆိုပါခြုံငုံ ANOVA (မိတ်လိုက်အပြုအမူအတွက်ကျဆင်းခြင်းများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ညွှန်ပြF(2,21) = 3.00, p = 0.07; သဖန်းသီး။ 3D), နှင့်အရေးပါမှု၏မရှိခြင်း CTAP (1 μg) ၏အနိမ့်ထိုးနဲ့ကုသဘာသာရပ်များအတွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏အဆင့်မြင့်၏ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးက t စမ်းသပ်မှုထို့ကြောင့်တိုက်ရိုက် 1 သို့မဟုတ်3μg CTAP နဲ့ကုသထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်ဘာသာရပ်အကြားမိတ်လိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းကြိမ်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးသမီးနှင့် 1 μg CTAP နဲ့ကုသရှိသူများအကြားမိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်၏နံပါတ်မရှိခြားနားချက် (ရှိခဲ့သည်t(15) = 0.22, p = 0.83), ဒါပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးသမီးနှင့်3μg CTAP (နဲ့ကုသရှိသူများအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိခဲ့t(14) 2.94, p = 0.01) ။ (နှင့်ယေဘုယျအားထက်ပိုမိုအုပ်စုနှစ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုသူတို့နှင့်အတူ) ကုသမှုအုပ်စုများ၏ကျန်မှာအသုံးပွုတဲ့စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်စေရန်, ခြုံငုံဒေတာတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒါ Mor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည် အဆိုပါ NAc core ကိုအတွင်းမိတ်လိုက်အပြုအမူများနှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် variable ကိုသက်ရောက်မှုရှိပုံပေါ်သည်။
အဆိုပါ NAc core ကိုအတွင်း Morse မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှမရကြဘူး။ ACTAP ၏, အနိမ့်မဟုတ်သလိုမြင့်သောမထိုးထိုးသည့် NAc core ကိုထိခိုက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသို့။ Inset, မီးခိုးရောင်အတွက် shaded ဆေးထိုး၏ဆိုက်ကို (လက်ဝဲ) နှင့် NAc core ကိုအတွင်း Mor ၏စည်းနှောင် (ညာ) ။ B-Dအဆိုပါ NAc အတွင်း Mor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါB) လှောင်အိမ်အချိန်သို့မဟုတ် (C) စုစုပေါင်းအဆက်အသွယ်အချိန် (ကတစ်လမ်းကြောင်းသစ် (ရှိခဲ့ပေမယ့်ဆိုလိုသည်မှာ, အချိန်, အဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း) ကိုမိတ်ဖက် + သူစိမ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်သုံးစွဲD) (မိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်များ၏အရေအတွက်လျော့ကျn =5သို့မဟုတ် 6) ။ *p ≤ 0.05 (လမ်းကြောင်းသစ်) ။ #p = 0.07 (လမ်းကြောင်းသစ်) ။
သိသိသာသာမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိခိုက်ဖို့ NAc core ကိုအတွင်း Mor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသည်ဤအပြုအမူအတွက် NAc core ကိုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ (ဖော်ထုတ်ကြပြီမဟုတ်ကြောင်း pair တစုံဘွန်း၏ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Aragona et al ။ , 2006; Aragona နှင့်ဝမ်, 2007; Resendez et al ။ , 2012) ။ သို့သော်မိတ်လိုက်နေတဲ့ကျဆင်းခြင်းများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက် dorsal striatum နှင့် NAc shell ကိုအတွက်မိတ်လိုက်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ), ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာ striatum သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီများမှာ function ကတော့ NAc core ကိုပု NAc shell ကိုနှင့် dorsal striatum အကြားတစ်ဦး striatal အကူးအပြောင်းဇုန် (အောင်လိုတွေအကြောင်းစနစ်, dorsolateral တစ် ventromedial မှတဆင့်ချိတ်ဆက်Haber et al ။ , 2000; Haber, 2003; Everitt နှင့် Robbins, 2005; Vanderschuren နှင့် Everitt, 2005) ။ ထို့ကြောင့်ဤဒေသအတွင်း Morse မိတ်ဖက် preference ကိုအပြုအမူ impact ဖို့လုံလောက်သောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမိတ်လိုက်အပေါ်အလယ်အလတ်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ မိတ်ဖက် preference ကိုအပြုအမူအပေါ် NAc core ကိုအတွင်းအလယ်အလတ် pharmacological သက်ရောက်မှုတစ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ထုံးစံအတွက် striatum ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသောအမြင်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လူမှုရေးဆုလာဘ်အပြုအမူအပေါ်အလယ်အလတ်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော NAc core ကိုအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းဇုန်များတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
NAc shell ကို
ယခင်လေ့လာမှုများကို (NAc shell ကိုမြင့်မားစွာပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဒေသကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီIkemoto, 2007; Britt နှင့် McGehee, 2008; Resendez et al ။ , 2012; Watabe-Uchida et al ။ , 2012), အထူးသဖြင့် function ကိုပတ်သတ်ပြီးအတွက် (Pecina နှင့် Berridge, 2005; Smith က et al ။ , 2010; Lammel et al ။ , 2011; Britt et al ။ , 2012; ရစ်ချတ် et al ။ , 2013) ။ အဆိုပါ ventral NAc shell ကိုမသော်လည်းဥပမာ, rostral dorsomedial NAc shell ကို (အပြုသဘော hedonics modulatesPecina နှင့် Berridge, 2005; Mahler et al ။ , 2007; Faure et al ။ , 2010; Smith က et al ။ , 2010) ။ ဤရွေ့ကားဒေသများတွင်လည်းခန္ဓာဗေဒကွဲပြားပါ၏ သူတို့သိသိသာသာကို (dorsomedial NAc shell ကိုပု ventral NAc shell ကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာ သာ. ကွီးမွတျစညျးရှိခြင်းနှင့်အတူ binding Mor အတွက်ကွာခြားBurkett et al ။ , 2011သူတို့၏ သဖန်းသီး။ 1) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုနောက် (ဤဒသေအတှငျးရှိ Morse differential ဖက်ဦးစားပေးထိနျးညှိခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးသဖန်းသီး။ 5).
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး (ကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုပုံတူကူးယူBurkett et al ။ , 2011) အနိမ့်နှင့်အတူ ventral NAc shell ကိုအတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုသရုပ်ပြ (t(8) = 3.62, p = 0.007) သို့မဟုတ်မြင့်မားသော (t(7) = 3.31, p = CTAP ၏ 0.03) ထိုး (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဘူးသဖန်းသီး။ 4A) ။ သို့သော် ventral NAc shell ကို, အနိမ့်ဖြစ်စေအတူ rostral dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (မတူပဲt(7) = 0.80, p = 0.45) သို့မဟုတ်မြင့်မားသော (t(4) = 0.46, p = CTAP ၏ 0.67) ထိုး (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖျက်သိမ်းသဖန်းသီး။ 4A) ။ အဆိုပါ NAc shell ကိုမဆိုဒေသအတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ Affiliate အပြုအမူ impact ခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ယေဘုယျလူမှုရေးအပြုအမူသို့မဟုတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏ရလဒ်မဟုတ်ခဲ့F(4,180) = 0.81, p = 0.53; စားပွဲတင် 2) သို့မဟုတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုဟာတွဲပြီးကာလအတွင်း (F(4,180) = 0.90, p = 0.48; စားပွဲတင် 3) ။ အဆိုပါမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း, ကုသမှုအုပ်စုများအကြားတစ်ဦးချင်းစီအခန်းကုန်ကာလ၌အဘယ်သူမျှမခြုံငုံခြားနားချက် (ရှိခဲ့F(4,105) = 0.17, p = 0.96; သဖန်းသီး။ 4B) သို့မဟုတ်စုစုပေါင်းအဆက်အသွယ်အချိန် (F(4,40) = 2.23, p = 0.08; သဖန်းသီး။ 4C) ။ အတူတကွဤအချက်အလက်များကို NAc အတွင်း, မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Mor စည်းမျဉ်းကတော့ dorsomedial NAc shell ကို, Morse နှင့်အတူသိပ်သည်းဒေသတွင်း (ရန်တိကျသောဖြစ်ပါသည်, ကြောင်းညွှန်ပြသဖန်းသီး။ 1), နှင့်, ဖြစ်ကောင်းအရေးအကြီးဆုံးကတော့, ထိုယခင်က (အပြုသဘော hedonics ်ပတ်သက်နေထားပြီးPecina နှင့် Berridge, 2005).
အဆိုပါ, dorsomedial, ဒါပေမယ့် ventral မဟုတ် NAc shell ကိုအတွင်း Morse မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ ACTAP ၏တစ်ခုခုကိုထိုးထိုးဆေးဟာ ventral NAc shell ကိုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲခဲ့ကြသည်သော်လည်း, ထို dorsomedial NAc shell ကိုသို့ CTAP ၏အနိမ့်နှင့်မြင့်မားထိုးနှစ်ဦးစလုံး၏ဆိုက်ကို-တိကျတဲ့ဆေးထိုး, မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း inhibited ။ Inset, အ dorsomedial Nac shell ကို (မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်) သို့မဟုတ် ventral NAc shell ကို (အလင်းမီးခိုးရောင်) (လက်ဝဲ) သို့ဆေးထိုး၏ဆိုက်ကိုနှင့်အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွင်း Mor ၏ binding (ညာ) ။ B-Dအဆိုပါ NAc shell ကိုသို့ CTAP ၏ထိုးဖြစ်စေနှင့်အတူ Mor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (မထိခိုက်ခဲ့ပါB) လှောင်အိမ်အချိန်, (C) စုစုပေါင်းအဆက်အသွယ်အချိန်ကို (မိတ်ဖက် + သူစိမ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်သုံးစွဲဆိုလိုသည်မှာ, အချိန်), သို့မဟုတ် (D) မိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်၏နံပါတ် (n = 4-9) ။ *p ≤ 0.05 ။ **p ≤ 0.005 ။
အဆိုပါ dorsal striatum မတူဘဲ, အ dorsomedial NAc shell ကိုအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏တားစီးနဲ့ဆက်စပ်မရခဲ့ dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း CTAP ၏အနိမ့်မဟုတ်သလိုမြင့်သောဆေးထိုးမ၏အုပ်ချုပ်မှုမိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကပြောင်းလဲအဖြစ် (မိတ်လိုက်လျော့နည်းသွားF(4,38) = 1.14, p = 0.35; သဖန်းသီး။ 4D) ကိုတွဲပြီးကာလအတွင်း။ (ထို dorsomedial NAc shell ကိုအတွက် Mor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှတဆင့်) မိတ်ဖက် preference ကို၏ဤတားစီးဖွဲ့စည်းရေးမိတ်လိုက်အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှတဆင့်ဆောင်ရွက်ရန်မဟုတ်ဘဲမိတ်လိုက်၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့အပွငျဤအချက်အလက်များကို dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းထိန်းညှိကြောင်းအကြံပြု အများဆုံးဖွယ်ရှိတိုက်ရိုက်မိတ်လိုက်အပြုအမူ impact သော dorsal striatum အတွင်းတည်ရှိသောတွေထက်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများ, မိတ်လိုက်နဲ့ဆက်စပ်အပြုသဘော hedonics မှတဆင့်။
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလူမှုရေးဆုလာဘ်တစ်ခုအစွမ်းထက်ဥပမာဖြစ်ပြီး, လက်ရှိလေ့လာမှုဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry ဒီအပြုအမူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းပြသသောအများအပြားတို့တွင် (ဝမ် et al ။ , 1999; Gingrich et al ။ , 2000; Aragona et al ။ , 2003; လျူနှင့်ဝမ်, 2003; Lim ကများနှင့်လူငယ်, 2004; Curtis နှင့်ဝမ်, 2005a, b; Aragona et al ။ , 2006; Aragona နှင့်ဝမ်, 2007; Lim က et al ။ , 2007; Burkett et al ။ , 2011; Hostetler et al ။ , 2011; Keebaugh နှင့်လူငယ်တို့, 2011; လျူ et al ။ , 2011) ။ T ကသူကလက်ရှိလေ့လာမှု pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ striatum အတွင်း Morse အတွက်ဒေသဆိုင်ရာတိကျတဲ့လူမှုရေးဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံယန္တရားများ၏ရလဒ်ကြောင်းသရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမကြာသေးခင်ကတွေ့ရှိချက် (ပုံတူကူးယူBurkett et al ။ , 2011) ထိုဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသရုပ်ပြခြင်းအားဖြင့် dorsal striatum, Morse လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေရှိရာဦးနှောက်ဒေသ (အတွင်း Morse ၏ activation လိုအပ်ပါတယ်DiFeliceantonio et al ။ , 2012) ။ တစ်ဦးကdditionally ကျနော်တို့ NAc အတွင်း endogenous opioids မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လည်းအရေးပါဖြစ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားပေးခွငျးဖွငျ့ဤလက်ရှိအသိပညာတိုးချဲ့; အထူးသ, အပြုသဘော hedonics အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့် NAc shell ကို၏ဒေသအတွင်း Morse ၏ activation pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအဘို့လိုအပ်ပါသည်။ အရေးကြီးတာကအဲဒီဒေတာ dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse ၏ဤသိပ်သည်း patch ကို (စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်အပြုသဘော hedonics mediates မသာသောပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားပေးPecina နှင့် Berridge, 2000; Smith ကနှင့် Berridge, 2007) ဒါပေမဲ့လူမှုရေးဆုလာဘ်အပါအဝင်အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အထွေထွေအခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် Morse pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းမိတ်လိုက်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လှုံ့ဆျောမှုနှင့် dorsomedial NAc shell ကိုအတွက် Morse ထိန်းညှိသောဒုတိယထိန်းညှိထားတဲ့အတွက်တဦးတည်း: အတူတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ Morse မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိပေးသောနှစ်ခုအလားအလာအပြိုင်ယန္တရားများဖော်ထုတ်ရန် ထိုကဲ့သို့သောမိတ်လိုက်အဖြစ်လူမှုရေးအရကြိုးလုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်ကြောင်းအပြုသဘောဆောင် hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့။
လှုံ့ဆျောမှု, အ dorsal striatum နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း (အဖော်ရှာခြင်းဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်Williams က et al ။ , 1992), နှင့်လက်ရှိလေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သော dorsal striatum အတွင်း endogenous opioid သည့်စနစ်အတိုင်းဤအပြုအမူဖျန်ဖြေကြောင့်အာရုံကြောစနစ်များ, ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, ကနဦးဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်ယှက်ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မိတ်လိုက်၏ opioid စည်းမျဉ်းသာမကြာသေးမီကလေ့လာထားပြီးဖြစ်သော်လည်း (Burkett et al ။ , 2011) နှင့်ကောင်းစွာနားမလည်ထို့ကြောင့်အခြားမျိုးစိတ်များထံမှဒေတာများကိုတိုက်ရိုက် (မိတ်လိုက်၏လုပ်ရပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးကြီးသောအဖြစ်ဒီစနစ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြတာဖြစ်ပါတယ်Coolen et al ။ , 2004; Parra-Gamez et al ။ , 2009; Komisaruk et al ။ , 2010) နှင့်မိတ်လိုက်နဲ့ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း (Coria-Avila et al ။ , 2008) ။ မိတ်လိုက်စဉ်အတွင်း, endogenous opioids (ဦးနှောက်၏ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဒေသများသို့ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်Szechtman et al ။ , 1981), နှင့်ကြွက်များတွင် Morse ၏အရံပိတ်ဆို့ထားခြင်းမိတ်လိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းကြားကာလတိုးပွါးအဖြစ် (အကြိမ်ကြိမ်၏ကြိမ်နှုန်းလျော့ကျတဲ့အတိုင်းဒီ peptides များလွှတ်ပေးရန်လိင်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ဘို့အရေးကြီးသည်အစ္စမေးလ် et al ။ , 2009) ။ တစ်ဦးကenkephalin ၏ dditionally, ဟူသောအသုံးအနှုနျး, Morse တစ်ခု endogenous ligand (Simantov et al ။ , 1977), (proestrous စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးကြွက်များ၏ dorsal striatum အတွက်တိုးပွါးရောမ et al ။ , 2006): lutenizing ဟော်မုန်းနှင့်အဓိကချို့ယွင်းပြင်းအားမျိုးဥထွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception နှင့်လှုံ့ဆျောမှုသွေးဆောင်ရှိမည်ဟုရှိရာ estrous သံသရာ၏အကာလ (Smith က et al ။ , 1975; Becker က, 2009) ။ အတူတကွဤရလဒ်များ dorsal striatum အတွင်း Morse ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့် mediates ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Iအစားအစာဆုလာဘ်၏လေ့လာမှုများအနေဖြင့် ndeed မကြာသေးခင်သက်သေအထောက်အထားများကိုတိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော် behavio အတွက် dorsal striatum အတွင်း Morse implicatesr (DiFeliceantonio et al ။ , 2012). အထူးသ enkephalin အစားအစာစားသုံးမှုစတင်ခြင်းစဉ်အတွင်း dorsal striatum အတွက်ဖြန့်ချိသည်နှင့်ဤလွှတ်ပေးရန်အပြုသဘောအစားအစာစားသုံးမှုကစတင်ခဲ့သည်မှာမြန်နှုန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် (DiFeliceantonio et al ။ , 2012), ဤဒေသအတွင်း Morse ၏ activation လှုံ့ဆော်မှုဆုချီးမှအစာစားချင်စိတ်တုံ့ပြန်မှု energizing များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းညွှန်ပြ (ရစ်ချတ် et al ။ , 2013) ။ ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောအလားအလာမိတ်လိုက်မိတ်ဖက်အဖြစ်အလွန်အမင်းအဓိကလူမှုရေးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏ရှေ့တော်၌အစဉ်သည်ဤ receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, အကျိုးကို (ဆိုလိုသည်မှာမိတ်လိုက်) ကိုရှာကွဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ ကဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျပစ္စုပ္ပန်ပါရာဒိုင်းအတွက်မိတ်လိုက်လှုံ့ဆျောမှုတိုင်းတာရန်မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသမီးများက lordosis တစ်မိတ်လိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း၏အောင်မြင်သောပြီးစီးလိုအပ်, ထိုသို့ထို့ကြောင့် dorsal striatal Mor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ mobility တစ်လျှော့ချရေးမှတဆင့်မိတ်လိုက်လျော့နည်းသွားကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်Becker က, 2009) ။ သို့သော်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးမိတ်လိုက်အပြုအမူအတွက် striatal Morse ၏တိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္ဍဆိတ်ကွယ်ရာမာရ်နတ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ, အ dorsal striatum ၏ activation လည်းဒီဒေသဟာရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်စဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်ဤတက်ကြွစွာမိတ်ဖက်များကသွေးဆောင်အပြုသဘော hedonic ပြည်နယ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းမပြုလုပ်လူသားတွေအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ကိုထိန်းညှိဖို့စဉ်းစားနေပါတယ် (Aron et al ။ , 2005). အလားတူပင်, အစားအစာစားသုံးမှုစဉ်အတွင်း dorsal striatum သို့ဖြန့်ချိ enkephalin ဒီလှုံ့ဆော်မှုဖို့ hedonic တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ (DiFeliceantonio et al ။ , 2012). ထို့ကြောင့် dorsal striatum အတွင်း Morse ၏ activation ဆုလာဘ်ရှာ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်မှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဲဒီဒေတာကြောင့်အကြံပြုအဆိုပါ dorsal striatum အတွင်း Morse ထိုကဲ့သို့သောမိတ်လိုက်အဖြစ်လူမှုရေးအရလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတုံ့ပြန်မှု, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြစ်မိတ်လိုက်၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များ, ထုတ်လုပ်အားဖြင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းမှအရေးပါဖြစ်နိုင်သည်။
positive hedonics, အ rostral dorsomedial NAc shell ကိုများနှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း
အဆိုပါ dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse အပြုသဘော hedonics ်ပတ်သက်နေကြပြီ (Berridge နှင့် Kringelbach, 2008) t ကိုဦးထုပ်ကို attachment ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အစောပိုင်းအဆင့်အရေးကြီးသည် (Panksepp et al ။ , 1980; Resendez နှင့် Aragona, 2013) ။ (ထိုတွဲပြီးကာလအတွင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထိုကဲ့သို့သော investigatory အပြုအမူအဖြစ်ကြိုးလူမှုရေး interaction က၏မြင့်မားအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ, မိတ်လိုက်နှင့် huddlingCarter ကနှင့် Getz, 1993) ။ ဤရွေ့ကား interaction ကတစ်နှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်အရေးကြီးပါသည် (Williams က et al ။ , 1992), နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကနေဒေတာ dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းလူမှုရေးအဆက်အသွယ်များနှင့်မိတ်လိုက် (လူမှုရေးဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောဆိုလိုသည်မှာသူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူ) နဲ့နှောင့်အယှက်မပြုခဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အဲဒီအစား, dorsomedial NAc shell ကိုအတွင်း Morse ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်မိတ်လိုက်ပြီးနောက်အပြုသဘောဆောင် hedonic signal ကို၏ဖယ်ရှားရေးလူမှုရေးဆုလာဘ် disrupts နှင့်တစ်ဦးအပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုလူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်နှောင့်ယှက် (Aragona နှင့်ဝမ်, 2009; Resendez နှင့် Aragona, 2013). ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များကို NAc shell ကိုအတွင်း Morse ၏ activation နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် hedonic အချက်ပြ, လူမှုရေးအရလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူလမ်းညွှန်များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းသရုပ်ပြကြောင်းလူမှုရေးဆုလာဘ်တစ်ခုယခင်လေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီများမှာ (Trezza et al ။ , 2011).
(လူမှုရေး Bond အတွက် hedonics တစ်အခန်းကဏ္ဍပြင်းပြင်းထန်ထန်လူ့စာပေကထောက်ခံသည်, တစ်ဦးမိတ်လိုက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလူမှုရေး interaction ကအမှန်ပင်ပျြောမှေ့စဖြစ်ဖော်ပြထားကြသည်Fisher က et al ။ , 2006) ။ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလူမှုရေး interaction ကတစ်ခုသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာမေတ္တာတော်ကိုစိတ်ဝင်စားမှု Activate ဆုလာဘ် circuitry ၏ကြည့်ရှုဓာတ်ပုံများ (Panksepp et al ။ , 2002; Fisher က et al ။ , 2006). အတူတူအဲဒီဒေတာနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီး homologous ဆုလာဘ်ဆားကစ်ရွေးချယ်ပူးတွဲဖိုင်ကိုဖွဲ့စည်းရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်ကို attachment အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြုသဘော၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ဆင့်ကဲရန်ပြောသော; နှင့်ဘုံအာရုံကြော circuit ကိုပျော်မွေ့ဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါပေးတော်မူသောငါတို့အလုပ်လူမှုရေးအရလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအပါအဝင်တစ်ဦး "ဘုံအာရုံကြောငွေကြေး" အတွက်သက်ရောက်မှုတွေယေဘုယျလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောရှိပြီး (Cabanac, 2002; Burgdorf နှင့် Panksepp, 2006).
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စင်ပြိုင်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့် hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့
ဦးနှောက်အတွင်းအစာစားချင်စိတ်အပြောင်းအလဲနဲ့သိမြင်မှုနှင့်ဆက်စပ်အပြိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့ striatal ဆားကစ်များအကြားအပြန်အလှန်, မော်တာနှင့် limbic ဒေသများ (ကပါဝင်ပတ်သက်Flaherty နှင့် Graybiel, 1994; Haber, 2003; Kreitzer နှင့် Berke, 2011). ထိုကဲ့သို့သောမိတ်လိုက်အဖြစ်ပူးတွဲဖိုင်ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း, သူတွေရဲ့စားသောက်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအကြားနားချင်းဆက်မှီ၏မရှိခြင်း, ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူနှင့်အပြုအမူများ၏နောက်ဆက်တွဲအပြုသဘော hedonic encoding ကထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း mated မိတ်ဖက်နှင့်အဆက်အသွယ်အဖြစ်, အနာဂတ်လူမှုရေးဆုလာဘ်ရှာလျော့ချဖို့ပြုမူစေခြင်းငှါ (Resendez နှင့် Aragona, 2013). စိတ်ဝင်စားစရာ, အ striatum သို့သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များတစ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်, လိမ်ပုံစံသို့ဖှဲ့စညျးထား (Haber et al ။ , 2000; ဘီးလင်း et al ။ , 2009) သော striatum အတွင်း pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Mor စည်းမျဉ်းများတွင်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားမှုများအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါ. အဆိုပါ dorsomedial NAc shell ကိုရှိသူတို့ကြောင့်တူညီတဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုများ၏အပြုသဘောဆောင် hedonic နိုင်တဲ့ coding ကိုထိန်းညှိဖို့ပေါ်လာသော်လည်းအထူးသ, အ dorsal striatum အတွက် Morse ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, တစ်ဦးအဓိကလူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာလျှော့ချမိတ်လိုက်) အားသင့်လျော်သောမော်တာတုံ့ပြန်မှု generate ဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် differential လူမှုရေးဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ code ကြောင့်ကွဲပြားအာရုံကြောစနစ်များအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို attachment ဖွဲ့စည်းရေးအဘို့အရေးကြီးပါသည်။
နိဂုံးချုပ်, (monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အကြားGetz et al ။ , 1981), အောင်မြင်သောမျိုးပွားမှုပါလိမ့်မယ်တဲ့အိမ်ထောင်ဖက်၏ရွေးချယ်မှု (စိုးရိမ်ရအရေးပါမှုသည်Curtis, 2010; Resendez et al ။ , 2012), နှင့်လက်ရှိလေ့လာမှုကို (striatum ၏ကွဲပြားဒေသများအတွင်းသင့်လျော်သော Mor activation လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ပြောင်းလဲမူကြောင်းကိုပြသResendez နှင့် Aragona, 2013) ။ အဆိုပါ striatum အတွင်းမှာပဲ dorsal နှင့် ventral ငျဒသေအတှငျးရှိ Morse အသီးသီးမိတ်လိုက်နဲ့မိတ်လိုက်၏ hedonic အကျိုးဆက်များပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပြိုင်လုပျဆောငျ။ အတူတူ, အစားအစာဆုလာဘ်၏လေ့လာမှုများအနေဖြင့်လက်ရှိဒေတာများနှင့်ဒေတာ (ထို striatum အတွင်း Morse ဆုလာဘ်များထဲမှအမျိုးအစားအတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍမှမညွှန်ပြBerridge နှင့် Kringelbach, 2013) မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးရွေးချယ်ပူးတွဲမှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပါအဝင်ကြိုး / သပ္ပါယ်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု, လှုံ့ဆျောယေဘုယျအာရုံကြောငွေကြေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။
သြဂုတ်လ 28, 2012 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူဧပြီလ 16, 2013 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံဧပြီလ 16, 2013 ။
ဤလုပ်ငန်းကိုကျနော်တို့အဘို့အစာရင်းအင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးများအတွက် opioid အဲဒီ receptor autoradiography, Kirsten ပေါ်တာ-Stransky နှင့်အတူအကူအညီယန်လျူ, ဦးနှောက်အချပ်များအတွက် Piper Keyes နှင့် Zouxin ဝမ်ကျေးဇူးတင် SLR မှ BJA နှင့် Rackham Merit Fellowship မှအမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း Grant က 0953106 ကထောက်ခံခဲ့သည် မြက်ခင်း voles ၏ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်း။
စာပေးစာယူ Brandon ဂျေ Aragona သို့မဟုတ် Shanna အယ်လ် Resendez, စိတ်ပညာဌာန, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်, အမ်း Arbore, MI 48109, တစ်ခုခုမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] or [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မူပိုင်ခွင့်© 2013 စာရေးသူ 0270-6474 / 13 / 339140-10 $ 15.00 / 0
အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေးပူးတွဲမှု, alloparental အပြုအမူ, နှင့် monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster) တွင် Affiliate အပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိသည့် neuropeptide စနစ်များကိုစောစောဘဝမိသားစုဖွဲ့စည်းပုံ၏ (2009) ကသက်ရောက်မှု တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience 3: 17 ။
(2007) ကနျူကလိယအတွင်းစခန်းအချက်ပြခြင်းဖြင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစည်းမျဉ်းအတိုက်အခံ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience 27: 13352-13356 ။
တစ်ဦး monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးရွေးချယ်မှု (2009) Dopamine စည်းမျဉ်း။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience 3: 15 ။
(2003) နျူကလိယဘို့တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience 23: 3483-3490 ။
(2006) နျူကလိယ dopamine differential monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates accumbens ။ နတ် neuroscience 9: 133-139 ။
Fisher က H ကို,
Mashek DJ သမား,
လီ H ကို,
အစောပိုင်းအဆင့်ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ် (2005) ဆုကြေး, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်များကို။ J ကို Neurophysiol 94: 327-337 ။
opiate အဲဒီ receptor Subtype ၏အခန်းကဏ္ဍ: အ ventral striatum ၏ opioid ဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် (1993) ကျွေးမွေး၏။ J ကို Pharmacol Exp Ther 265: 1253-1260 ။
ဗန် Westerhuyzen ဂျာ
Lewis က-Reese အေဒီ,
Carter က CS
(2007a) oxytocin အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ-Bond နှင့် alloparental စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ထိုး-မှီခိုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Horm ပြုမူနေ 52: 274-279 ။
Plotsky pm တွင်,
Lim က MM,
Grotte N ကို,
(2007b) မွေးကင်းစကလေး oxytocin ထိန်းသိမ်းရေး receptors vasopressin အပေါ်ကြာရှည်လိင် dimorphic သက်ရောက်မှုရှိသည်။ neuroscience 144: 38-45 ။
Keebaugh AC အ,
(2013) မူကွဲ vasopressin အဲဒီ receptor အတွက် (Avpr1a) စကားရပ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်စျမယားနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူမှာမတူကွဲပြားမှုတွေဖန်တီးပေးပါတယ်။ Horm ပြုမူနေ 63: 518-526 ။
လှုံ့ဆျောမှု၏ (2009) လိင်ကွဲပြားခြားနားမှု: တစ်ဝတ္ထုယန္တရား? Horm ပြုမူနေ 55: 646-654 ။
(2010) oxytocin နှင့်အမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles အတွက်လိင်တူချင်းလူမှုရေးအပြုအမူ။ neuroscience 169: 665-673 ။
Jonkman S က,
စွဲလမ်း၏နားလည်မှုအဘို့ဆီလျော်: အ Basal ganglia အတွင်း (2009) စင်ပြိုင်နှင့်အပြန်အလှန်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 199: 89-102 ။
အပျော်အပါး၏ (2008) ကိုထိခိုက် neuroscience: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုလာဘ်။ Psychopharmacology (Berl) 199: 457-480 ။
အကျိုးသက်ရောက်စေ၏ (2013) အာရုံကြောသိပ္ပံ: အပျြောအပါးနှင့်အမျက်တော်၏ဦးနှောက်ယန္တရားများ။ Curr Opin Neurobiol, အွန်လိုင်းထုတ်ဝေအဆင့်မြှင့်။ ဇန်နဝါရီလ 30, 2013 ရယူရန်။
(2003) ဆန်းစစ်မှုဆုလာဘ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 26: 507-513 ။
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2008) Presynaptic opioid နှင့် dopamine လျတ်၏နီကိုတင်းအဲဒီ receptor မော်ဂျူ။ J ကို neuroscience 28: 1672-1681 ။
Benaliouad က F,
(2012) Synaptic နှင့် nucelus accumbens မှမျိုးစုံ glutamatergic သွင်းအားစုများ၏အမူအကျင့်ပရိုဖိုင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 76: 790-803 ။
Burgdorf J ကို,
Panksepp J ကို
(2006) အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှု၏ neurobiology ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 30: 173-187 ။
Inoue K သည်,
Murphy က AZ,
အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် mu-opioid receptors ၏ (2011) Activation monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 36: 2200-2210 ။
Cabanac M က
(2002) စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဘာလဲ? ပြုမူနေ Processes 60: 69-83 ။
Smith က KN,
ခံစားချက်နှင့်စိတ်ခံစားမှုအတွက် (2004): အဆိုပါအမ်စတာဒမ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ, အဆိုပါစနစ်အားထိခိုက်စေ: အဘယျသို့ခံစားချက်တွေကို၏မျက်နှာပြင်ကိုအောက်တွင်ပုန်းကွယ်? eds Manstead Asr, Frijda N ကို, Fischer တစ်ဦးက (ကင်းဘရစ် UP, ကင်းဘရစ်), စစ 223-242 ။
Carter က CS,
(1993) မယားနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ။ သိပ္ပံ Am 268: 100-106 ။
(2002) ဟော်မုန်းအတွက်, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ, လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုနဲ့ pair တစုံဘွန်း, eds Pfaff: D, အာနိုးတစ်ဦးက, Etgen S က, Fahrbach S က, Rubin က R ကို (Academic, San Diego မှ), စစ 299-337 ၏ neurobiology ။
cho ဟာ MM,
DeVries AC အ,
Williams က JR,
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးအပေါ် oxytocin နှင့် vasopressin ၏ (1999) ကသက်ရောက်မှု (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience 113: 1071-1079 ။
အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိအောက်ပါ medial preoptic ဧရိယာ၌ mu opioid receptors ၏ (2004) Activation ။ neuroscience 124: 11-21 ။
ရိုင်ယန် R ကို,
Ménard S က,
naloxone အားဖြင့်ဗြဲ Disruption: အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် conditional မိတ်ဖက် preference ကို၏ (2008) Neurochemical အခြေခံ။ ပြုမူနေ neuroscience 122: 385-395 ။
(2010) မွေးဖွားသောတံပိုးမှုတ်စျမယားပါသလား Animation ပြုမူနေ 80: 319-328 ။
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက် (2005a) Glucocorticoid အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု: ဗဟို dopamine ဆုလာဘ်စနစ်များနှင့်အတူစူးရှပိတ်ဆို့ထားခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်၏ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience 134: 369-376 ။
အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက် (2005b) Ventral tegmental ဧရိယာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ 86: 338-346 ။
အဆိုပါ vomeronasal ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို၏ (2001) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် (Microtus ochrogaster) မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံဘွန်းနှောင့်အယှက် ဦးနှောက် Res 901: 167-174 ။
ဗဟိုမိုင်နိုအက်စစ် vasopressin နဲ့အရွယ်ရောက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် V2003a receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအုပ်ချုပ်ဖို့နောက်ဆက်တွဲအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မွေးကင်းစကလေးများသင်း၏ (1) အဆိုပါဆိုးကျိုးများ။ J ကို Neuroendocrinol 15: 1021-1026 ။
Musatov S က,
Ogawa S က,
Papademetriou E ကို
အဆိုပါ medial amygdala အတွက် (2008) estrogen receptor အထီး prosocial အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတားစီး။ J ကို neuroscience 28: 10399-10403 ။
Balleine B ကို
(2010) ကဦးနှောက်, Hedonics ၏အပျြောအပါးမှာရှိတဲ့: အသိမြင်-စိတ်ခွန်အားနိုး interface ကို, eds Kringelbach ML, Berridge KC (Oxford တက္ကသိုလ် UP, နယူးယောက်), စစ 74-84 ။
DiFeliceantonio AG က,
Mabrouk OS ကို,
ကနေဒီ RT ကို,
(2012) Enkephalin စားရန်အချက်ပြအဖြစ် dorsal neostriatum အတွက် surges ။ Curr Biol 22: 1918-1924 ။
Spiegel L ကို,
(2010) ဗဟို vasopressin V1a အဲဒီ receptor activation လူမှုရေးအရ monogamous အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စကားရပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်လွတ်လပ်စွာလိုအပ်ပေသည်။ ပြုမူနေ neuroscience 124: 159-163 ။
မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့် (အ 2005) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience 8: 1481-1489 ။
(2010) Desire နှင့်နျူကလိယကနေကြောက် accumbens: cortical အချိုမှုများနှင့် subcortical ဂါဘမြို့သား differential ကြွက်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် hedonic သက်ရောက်မှု generate ။ PLoS တစ်ခုမှာ 5: e11223 ။
(2006) ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ: အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုများအတွက်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်စနစ်။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 361: 2173-2186 ။
အဆိုပါရှဉ့မျောက်အတွက် sensorimotor striatum ၏ (1994) Input အား-output ကိုအဖွဲ့အစည်းက။ J ကို neuroscience 14: 599-610 ။
မုဆိုး CD ကို,
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles ၏ဦးနှောက်အတွက်အီစရိုဂျင် receptor-alpha-၏ဆဲလ်အပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး၏ (2005) အီစထိုဂျင်စည်းမျဉ်း။ J ကို comp Neurol 489: 166-179 ။
(1992) က neostriatal mosaic: compartmental အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 15: 133-139 ။
Gavish L ကို
(1981) မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole, Microtus ochrogaster ၏မိတ်လိုက်သည့်စနစ်: pair တစုံ Bond အဘို့လယ်ပြင်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသက်သေအထောက်အထား။ Ecole Sociobiol 8: 189-194 ။
Gingrich B က,
Cascio ကို C,
ဝမ် Z ကို,
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2000) Dopamine D2 receptors အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) တွင်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည် ပြုမူနေ neuroscience 114: 173-183 ။
အဆိုပါ Basal ganglia အတွက် (1990) Neurotransmitters နှင့် neuromodulators ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 13: 244-254 ။
[Met] enkephalin ကဲ့သို့ immunoreactivity ဖော်ပြ striatal ဆဲလ်အသေကောင်များ (1984) Compartmental ဖြန့်ဖြူး။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 81: 7980-7984 ။
(2003) ကမျောက် Basal ganglia: အပြိုင်နှင့် Integrated ကွန်ရက်များ။ J ကို Chem Neuroanat 26: 317-330 ။
(2000) မျောက်ဝံများအတွက် Striatonigrostriatal လမ်းကြောင်းဟာ dorsolateral striatum ဖို့ shell ကိုတစ်ဦးထံမှတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလိမ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ J ကို neuroscience 20: 2369-2382 ။
Reimold M က,
Croissant B က,
R ကို Bares,
မန်း K သည်
ကာဗွန် 2005-တံဆိပ်ကပ် carfentanil သုံးပြီး positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု: အရက်တဏှာနှင့်အတူ detoxified အရက်သမားလူနာ striatal mu-opioid အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်တည်ငြိမ်ဓာတ်လှေကား (11) ညမညသဘောတရား။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 62: 57-64 ။
Herkenham M က,
Edley သည် SM,
စတူးဝပ် J ကို
(1984) ဆဲလ်ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်ပြွတ်နှင့် opiate receptors, acteylcholinesterase နှင့် subcortical afferent ပိတ်ပစ်ခြင်းဟာ mosaic ကြားဆက်ဆံရေး။ neuroscience 11: 561-593 ။
(2011) ကို D1 agonist SKF38393 မှမွေးကင်းစကလေးထိတွေ့အရွယ်ရောက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံ Bond ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ပြုမူနေ Pharmacol 22: 703-710 ။
(2007) Dopamine ဆုလာဘ် circuitry: အနျူကလိယဖို့ ventral midbrain ကနေနှစ်ခု projection စနစ်များ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေး။ ဦးနှောက် Res ဗြာ 56: 27-78 ။
(1992) oxytocin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အတွက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကထင်ဟပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 89: 5981-5985 ။
microtine ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးနဲ့ဆက်စပ်အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး vasopressin ဦးနှောက်၏ (1994) ပုံစံများ။ J ကို neuroscience 14: 5381-5392 ။
အစ္စမေးလ် N ကို,
Nakanishi S က,
(2009) Naloxone, ဒါပေမယ့် flupenthixol ဘဲ, အအထီးကြွက်များတွင် conditional ejaculatory preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု disrupts ။ ပြုမူနေ neuroscience 123: 992-999 ။
ဗန် der Kooy: D
striatal ပုံစံဖွဲ့စည်းခြင်း (1990) ယန္တရားများ: နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ compartmentalization ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res 57: 93-102 ။
(2011) Pre-pubertal အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့် oxytocin အဲဒီ receptor စကားရပ်လူကြီးများအဖြစ် alloparental တုန့်ပြန်နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ Horm ပြုမူနေ 60: 498-504 ။
(2002) သဘာဝကဆုလာဘ်၏ neuroscience: စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆီလျော်။ J ကို neuroscience 22: 3306-3311 ။
စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ, arousal နှင့်အစားအစာဆုလာဘ်များ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် (2005) တစ်ဦးကအဆိုပြုထား hypothalamic-thalamic-striatal ဝင်ရိုး။ J ကို comp Neurol 493: 72-85 ။
Whipple B က,
Beyer ကို C
ဦးနှောက်အပျြောအပါး, လိင်အပျော်အပါး, eds Kringelbach ML, Berridge KC (Oxford တက္ကသိုလ် UP, နယူးယောက်), စစ 2010-169 အတွက် (177) ။
Kreitzer AC အ,
(2011) ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးမှတဆင့် striatal function ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ neuroscience 198: 19-26 ။
Lammel S က,
Roeper J ကို,
ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျ synapses ၏ (2011) Project-တိကျတဲ့မော်ဂျူ။ အာရုံခံဆဲလျ 70: 855-862 ။
Leknes S က,
ဦးနှောက်အပျြောအပါး, နာကျင်မှုများနှင့်အပျော်အပါးအတွက် (2010): လူသားထု၏သခင်, eds Kringelbach ML, Berridge KC (Oxford တက္ကသိုလ် UP, နယူးယောက်), စစ 320-335 ။
အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအခြေခံ (2004) Vasopressin-မှီခိုအာရုံကြောဆားကစ်။ neuroscience 125: 35-45 ။
Bai Y ကို,
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2007) CRF receptors မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို modulate ။ Horm ပြုမူနေ 51: 508-515 ။
အဆိုပါ vole ဦးနှောက်ထဲမှာ corticotropin-releasing အချက်နှင့် urocortin 2006 ၏ (1) ဖြန့်ဖြူး။ ဦးနှောက်ပြုမူနေ Evol 68: 229-240 ။
(2003) နျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ oxytocin နှင့် dopamine interactive accumbens ။ neuroscience 121: 537-544 ။
Kabbaj M က,
Mazei-Robison M က,
(2010) နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 107: 1217-1222 ။
(2011) လူမှု Bond တစ်ဦး dopamine D1 အဲဒီ receptor-mediated ယန္တရားမှတဆင့်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးဂုဏ်သတ္တိများလျော့နည်းစေပါသည်။ J ကို neuroscience 31: 7960-7966 ။
အာရုံခံအပျြောအပါးအဘို့ (2007) Endocannabinoid hedonic ဟော့စပေါ့: anandamide နျူကလိယထဲမှာအခွံမွှေးဆုလာဘ်၏ "ကဲ့သို့" ပိုကောင်းစေပါတယ် accumbens ။ Neuropsychopharmacology 32: 2267-2278 ။
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2006) oxytocin receptors အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထဲမှာ "အလိုအလျောက်" မိခင်အပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့။ neuroscience 141: 559-568 ။
Panksepp J ကို,
Vilberg T က,
ဆရာတော် P ကို,
(1980) Endogenous opioids နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 4: 473-487 ။
Burgdorf J ကို
စှဲအတွက်ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များ (2002) အခန်းကဏ္ဍ: တစ် neuro-ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်သစ် "Self-အစီရင်ခံစာ" တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်။ စှဲမွဲမှု 97: 459-469 ။
Parra-Gámez L ကို,
Garcia-Hidalgo AA ကို,
Anton B က,
(2009) Endomorphin-1, အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ 97: 98-101 ။
microinjection Fos ထွက်လာသည့်အပူရှိန်အပေါ်အခြေခံပြီးမြေပုံ: နျူကလိယ၌ (2000) Opioid site ကို shell ကိုစားစရာဘို့အစာစားခြင်းနှင့် hedonic "ကဲ့သို့" mediates accumbens ။ ဦးနှောက် Res 863: 71-86 ။
(2005) နျူကလိယအတွက် Hedonic ပူပွဲချင်းပြီး shell ကို accumbens: ဘယ်မှာμ-opioids အကြောင်းမရှိချို၏ hedonic သက်ရောက်မှုတိုးလာသလဲ? J ကို neuroscience 25: 11777-11786 ။
(2013) ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆျောမှုနှင့် monogamous pair တစုံဘွန်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ ဗြာ neuroscience 24: 51-60 ။
Kuhnmuench M က,
Krzywosinski T က,
နျူကလီးယပ်အတွင်း (2012) κ-Opioid receptors shell ကိုဖျန်ဖြေတစ်စုံနှောင်ကြိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု accumbens ။ J ကို neuroscience 32: 6771-6784 ။
ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ (2013) မြေပုံဦးနှောက်ဆားကစ်: အန်းကယ်လီအပေါ်ခြေရာအတွက်။ neuroscience Biobehav ဗြာ, အွန်လိုင်းထုတ်ဝေအဆင့်မြှင့်။ ဒီဇင်ဘာလ 19, 2012 ရယူရန်။
Ploj K သည်,
Gustafsson L ကို,
Sprague-Dawley ကြွက်များတွင် estrous သံသရာစဉ်အတွင်း opioid peptide အဆင့်ဆင့်အတွက် (2006) အပြောင်းအလဲတွေဟာ။ Neuropeptides 20: 195-206 ။
Simantov R ကို,
(1977) Opioid peptides: radioimmunoassay အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် radioreceptor assay ။ ဦးနှောက် Res 135: 358-367 ။
အကျိုးသည် (2007) Opioid limbic ဆားကစ်: နျူကလိယ accumbens ၏ hedonic ဟော့စပေါ့နှင့် ventral pallidum အကြားအပြန်အလှန်။ J ကို neuroscience 27: 1594-1605 ။
Pecina S က,
ဦးနှောက်အပျြောအပါးအတွက် (2010), Hedonic ဟော့စပေါ့: ဦးနှောက်အတွက်ထုတ်လုပ်အာရုံခံအပျြောအပါး, eds Kringelbach ML, Berridge KC (Oxford တက္ကသိုလ် UP, နယူးယောက်), စစ 27-49 ။
Smith ကက MS,
Freeman က ME,
(1975) ကိုကြွက်များတွင် estrous သံသရာနှင့်အစောပိုင်း pseudopregnancy ကာလအတွင်းချို့ယွင်းသောလျှို့ဝှက်ချက်များ၏ထိန်းချုပ်မှု: pseudopregnancy ၏ Corpus luteum ၏ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ် prolactin, gonadotropin နှင့် Steroid တစ်မျိုးအဆင့်ဆင့်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 96: 219-226 ။
Szechtman H ကို,
Hershkowitz M က,
Simantov R ကို
(1981) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနာကျင်မှု sensitivity ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်အထီးကြွက်များတွင် endogenous opioids လှုံ့ဆော်။ EUR J ကို Pharmacol 70: 279-285 ။
Trezza V ကို,
Damsteegt R ကို,
(2011) နျူကလိယμ-opioid receptors လူမှုရေးဆုလာဘ်ဖျန်ဖြေ accumbens ။ J ကို neuroscience 31: 6362-6370 ။
(2005) အပြုအမူနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏အာရုံကြောယန္တရားများ။ EUR J ကို Pharmacol 5: 77-88 ။
Voorn P ကို,
(1996) လူ့ striatum အတွက် binding opioid အဲဒီ receptor ligand အပေါ် Densitometrical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: mu opioid အဲဒီ receptor ၏ဗြဲဖြန့်ဖြူးသည့် ventral straitum ၏ shell ကိုနှင့် core ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ neuroscience 75: 777-792 ။
(1997) လိင်နှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအပြုအမူနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အာရုံကြော activation ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက် Res 767: 321-332 ။
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး (က 1999) Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းများအတွက်ယန္တရား? ပြုမူနေ neuroscience 113: 602-611 ။
Watabe-Uchida M က,
Zhu L ကို,
Ogawa SK ကို,
midbrain dopamine အာရုံခံတိုက်ရိုက်သွင်းအားစု၏ (2012) လုံး-ဦးနှောက်မြေပုံ။ အာရုံခံဆဲလျ 74: 858-873 ။
Watson ဟာ KK,
ဦးနှောက်အပျြောအပါး, အပျြောအပါး၏ Neuroethology, eds Kringelbach ML, Berridge KC (Oxford တက္ကသိုလ် UP, နယူးယောက်), စစ 2010-85 အတွက် (95) ။
Insel T က
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် (1992) Partner preference ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတမိတ်လိုက်သို့မဟုတ် oxytocin ၏ဗဟိုပြုတ်ရည်များကလွယ်ကူချောမွေ့နေပါတယ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 652: 487-489 ။
အလျင်အမြန် N ကို,
(1993) monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ 365: 545-548 ။
Nilsen R ကို,
အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ: monogamous နှင့် nonmonogamous voles အတွက် V1997a receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်၌ (1) မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု။ ပြုမူနေ neuroscience 111: 599-605 ။
(1999) တစ်ဦး monogamous vole ထံမှ V1a အဲဒီ receptor ဖော်ပြကြွက်တွေမှာ vasopressin မှ Affiliate တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်။ သဘာဝ 400: 766-768 ။
အဆိုပါစုံတွဲကိုနှောင်ကြိုးများ (2005) ခန္ဓာဗေဒနှင့် neurochemistry ။ J ကို comp Neurol 493: 51-57 ။
Zhang က M ကို,
microinjection မြေပုံနှင့် fos စကားရပ်: striatal μ-opioid ဆွအောက်ပါ High-အဆီအစားအစာ (2000) Enhanced စားသုံးမှု။ neuroscience 99: 267-277 ။
Nucleus ရှိ Opioid Hedonic Hotspot သည် Ac Likens Shell - Mu, Delta နှင့် Kappa Maps တို့၏ချိုမြိန်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်“ လိုချင်ခြင်း” ကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းဖြစ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 19 မတ်လ 2014, 34 (12): 4239-4250